तिमी प्रति मेरा माया - Dubulki.com
Home » Nepali Poem: Kabita » तिमी प्रति मेरा माया
तिमी प्रति मेरा माया (Timi Prati Mera Maya)
January 18, 2016 5:58 am Category: Nepali Poem: Kabita Leaveacomment A+ / A-
जब तिमी पिंडाले रुन्छेउ,
म तिम्रा आँशुहरु पुछिदिनेछु।
जब तिमी संसारदेखी डराउनेछेउ,
म तिम्रोसाथ हुनेछु।
जब तिमीलाई मेरो मायाँ चाहिन्छ,
म मेरो मुटु दिनेछु।
जब तिमी बिरामी पर्नेछेउ ,
म तिम्रो स्याहार्-सुसार गर्नेछु।
तिमीलाई थाहा छ ?
यि मेरा माया तिमी प्रति कहिल्यै सकिने छैनन।
यि मेराकसमहरु रितुझैं बदलिइनेछैनन।
तिमी एकपल्ट मेरो हृदयको दर्पणलाई चिहाएर हेर,
तिम्रो अभाबमा रगतको आँशुले पोतिएको एउटा मुटु छ,
मेरो मायाँतिमिलाई सदा-सदा सगरमाथाझैं अटल रहनेछ,
मेरो मायाँ प्यसिफिक महासागरझैं सदा-सर्बदा गहिरिएर रहनेछ।
तिमी प्रति मेरा माया Reviewed by Saugat.Ch on Jan 18 . जब तिमी पिंडाले रुन्छेउ, म तिम्रा आँशुहरु पुछिदिनेछु। जब तिमी संसारदेखी डराउनेछेउ, म तिम्रोसाथ हुनेछु। जब तिमीलाई मेरो मायाँ चाहिन्छ, म मेरो मुटु दिनेछु। जब तिम जब तिमी पिंडाले रुन्छेउ, म तिम्रा आँशुहरु पुछिदिनेछु। जब तिमी संसारदेखी डराउनेछेउ, म तिम्रोसाथ हुनेछु। जब तिमीलाई मेरो मायाँ चाहिन्छ, म मेरो मुटु दिनेछु। जब तिम Rating: 0
आ-आफ्नै दुनियामा भुलेका छन्...नशा चढाउने गजबको मात हौ तिमी...